Axmed Fiqi "Galmudug ma ahan State ku yaala Mareykanka oo aqoonsi uga baahan Safiir dhinac u janjeera" - Jowhar Somali news Leader
Home News Axmed Fiqi “Galmudug ma ahan State ku yaala Mareykanka oo aqoonsi uga...
Axmed Fiqi “Galmudug ma ahan State ku yaala Mareykanka oo aqoonsi uga baahan Safiir dhinac u janjeera”
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto Galmudug ayaa ka hadlay mowqifkiisa ku aadan doorashada maanta ka dhacday magaalada Dhuusamareeb iyo aqoonsiga dowlada Maraykanku aqoonsatay doorashada.
Qoraal uu soo dhigey bartiisa ayuu ku bilaabay in doorashooyin badan ay ka dhaceen Galmudug loona baahan yahay in lagu dadaalo sidii loo xallin lahaa khilaafka jira.
“Galmudug haddii doorashooyin kala duwan ay ka dhaceen oo madax kala duwan soo saartey, waxaa muhiim ah wixii hadda ka danbeeya in loo hawlgalo sidii loo xallin lahaa kala taagnaanta iyo khilaafka jira, hal meelna la isugu soo uruuriyo maamuladaas isdiidan.”ayuu yiri xildhibaan Fiqi.
Afar sano ka hor Galmudug oo cusub oo aan khilaaf badan ka dhexjirin ayaa madaxdii joogtay ay ku fashilantey hogaaminteeda iskaba daa ayadoo kala qeybsan maanta.
Uma arko hambalyada safiirada ajnabiga ah sida Yamamato In ay Galmudug ilowsiin karto xanuunka kala qeybsanaanta, Galmudug ma ahan state ku dhexyaalla maraykanka oo aqoonsi uga baahan safiir horey loo sii ogaa mowqifkiisa dhinaca u janjeera.
Waxaan dadka reer Galmduug xusuusinayaa inuusan u oolin dabaaldegid iyo hambalyo diris ayadoo ay Galmudug gudaheeda ay ku sugan yihiin 3 maamul oo hey’adahoodii barlamaanka wada wata, waxaan ka shaqsi ahaa qeyb ka noqon doonaa dadaalada nabadda iyo wadahadalka ee Galmudug lagu midaynayo si maamul dadkeedu raalli ka wada yihiin loo helo.